Fiahiana ara-tsosialy vaovao : hiakatra 65% ny fisotroan-dronono raha mihatra | NewsMada
Fiahiana ara-tsosialy vaovao : hiakatra 65% ny fisotroan-dronono raha mihatra
Par Taratra sur 26/01/2016
Nosantarina tany Ambositra, ny 22 janoary teo ny taom-piasana 2016 ho an’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps). Nitarika azy ny tale jeneraly, Arizaka Rabekoto Raoul sy ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Botoudi Rémi Henri. Notokanana ny tranobe anankiroa, fonenan’ny mpiasa, nitsangana koa ny klioba Cnaps zandriolona any an-toerana avy ao amin’ny kilasy fahenina ao amin’ny CEG Ambohimiadana.
Ankoatra ireo, antenain’ny rehetra ny fanatanterahana ny voarakitry ny Sata vaovao mifehy ny fiahiana ara-tsosialy (CPS). Efa voarafitry ny Cnaps sy ny teknisianina izy io ary natolotra ny primatiora tamin’ny fiandohan’ny taona 2015 teo. Araka ny dingana samihafa, andrasana ny fankatoavan’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona azy, mialoha ny hivoahan’ny didy fampiharana.
Anisan’ny zava-baovao ao anatin’io CPS io ny fisondrotan’ny fisotroan-dronono hatrany amin’ny 65%, mba hifanaraka amin’ny fisondrotry ny vidim-piainana ankehitriny. Tsy hisy intsony ny famerenana ny latsakemboka (remboursement de côtisation). Hiakatra ho 6.000 Ar isam-bolana ny volan-jaza raha 2.000 Ar izany amin’izao fotoana izao.
Hivoaka amin’ny jona ny an’ny tantsaha
Nampanantena ny mpitantana ny Cnaps, fa hivoaka mialoha ny volana jona 2016 ho avy izao ny volavolan-dalàna mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny tantsaha, ary hatolotra ny fanjakana mahefa. Tsy ho diso anjara koa ny olona tsy an’asa, satria eo am-pandinihana sy am-panadihadiana ny handrosoana tolo-kevitra sy volavolan-dalàna hanomezan’ny Cnaps tambin-karama ho an’ny tsy an’asa (indemnité de chômage).
Ankoatra ny lanonana ssamihafa, nanolotra omby ho an’ny vahoakan’Ampivarotanomby sy Manolotrony any Ambositra koa ny Cnaps, toerana nanorenana ireo trano fonenan’ny mpiasa.